Tafa niarahana tamin’i Elena Tambriz, mpikatroka ho an’ny fiteny K’iche’ · Global Voices teny Malagasy
Mpampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 1 -7 Jona, 2020.
Voadika ny 18 Jona 2020 15:53 GMT
Sary nozarain'i Elena Tambriz
Ny taona 2020, hotohizantsika ny fanentanana ety anaty media sôsialy hanasàntsika olona maro hitantana ny kaonty Twitter, @ActLenguas (Fikatrohana ho an'ny fiteny) ka hizaran'izy ireny ny niainan-dry zareo tamin'ny tamin'ny famelomana indray sy fisoloana vava ireo fiteny zanatany. Resahan'ity lahatsoratra fampahafantarana ity ny momba an'i Elena Tambriz (@elena_tambriz) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Elena Tambriz no anarako, K’iche’ Maiàna avy any Goatemalà. Mpandika teny, mpandika lahatsoratra ary mpanoratra tononkira. Miteny tsy miambakavaka fiteny telo aho : K’iche’ Maiàna, Espaniôla ary Anglisy.
Avy any amin'ny faripiadidian'i Nahualá, departemantan'i Sololá, Goatemalà. Avy amin'ny foko K'iche’ Maiàna. Nandia ny fanabeazana fototra sy ny fianarana manokana tao amin'ny Instituto Socorro ao Antigoà, Goatemalà. Avy eo, nanam-bintana nahazo vatsimpianarana nandritra ny taona roa haka diplaoma teknika tao amin'ny Hocking College, tany Ohio, Etazonia.
Mpandika Iahatsoratra, efa nahavita marobe avy amin'ny teny Anglisy mankamin'ny fiteny K'iche’ Maiàna lalaiko. Fandikana momba ny Facebook, Windows, Xbox, Bing, Mozilla ho amin'ny teny teratany, Skype ary ireo rindrambaiko be mpampiasa indrindra momba ny fananganana tambajotra, isan'ireny ny banky, toetrandro, fitsangantsanganana, fanatanjahantena, sakafo sy lohahevitra maro hafa.
Tena heni-boninahitra aho no sady faly mahazo fahafahana handika voambolana marobe ho amin'ny fiteny K'iche’ lalaiko satria amin'io fomba io aho dia manohana ny fitahirizana, fanapariahana ary fitiavana ny tenindreniko.
Hatramin'ny 2012 aho dia niasa ihany koa nanao mpandika teny ho ana orinasa iray tany Etazonia. Asa fandikana ho amin'ny fiteny K’iche’ Maiàna ho an'ireo izay tsy mahay ny fiteny Anglisy na Espaniôla. Mahatsiaro ho tena tsara vintana aho afaka manohana ny vahoakako amin'io fomba io.
Soa ihany, misy orinasa samihafa sy fikambanana manohana ny fikatrohana nomerika amin'ny fiteny Maiàna isankarazany, isan'ireny ny K'iche’ Maya. Isaorako ny hetsika @ActLenguas izay manome ahy ity habaka ity mba hampahafantarana sy hizaràna ireo zavatra tena manandanja momba io teny K'iche’ Maiàna lalaiko io.
“Fikatrohana nomerika amin'ny fiteny teratany”: Hetsika fanohanana ireo fiteny Maiàna. Ao anatin'ny fenitr'ilay tetikasa “Fikatrohana nomerika amin'ny fiteny teratany” atosiky ny Rising Voices ary iarahana miasa amin'ny Pueblo CLICK, nisy fihaonana natao tamin'ny 11 -12 Aprily 2017 tao amin'ny Ivontoerana Fibeazana Pavarotti ao San Lucas Tolimán, Sololá, ny Fihaonamben'ny Fikatrohana an'ireo Fiteny Teratany, manokana tamin'izany ny fiteny Kaqchikel. Mpikatroka maherin'ny 30 avy amin'ny faritra samihafa ao Goatemalà no tafahaona tamin'io.
Mandritra io fotoana io, misy fomba marobe isankarazany entina mampiroborobo ny fahalalàna fototra momba ny grameran'ny fiteny K'iche’ Maiàna, ny kolontsaina ary ny ara-panahy.
Ohatra, taona vitsy lasa izay, ny Ministera misahana ny Fampianarana ao Goatemalà dia nanao hetsika iray hametrahana ny fampianarana ireo fiteny Maiàna any amin'ny fanabeazana fototra sy ny ambaratonga faharoa fototra. Marobe ireo ankizy izay, noho ny antony maro, tsy nahay intsony ny fitenin'izy ireo, ankehitriny no manana vintana hianarana izany any an-tsekoly.
Eritreretiko ny hifantoka amin'ireto lohahevitra manaraka ireto:
ireo fiteny Maiàna ao Goatemalà
ny traikefa azoko amin'ny maha-mpandika teny, mpandika lahatsoratra ary mpanoratra hira amin'ny fiteny K’iche’ Maiàna ahy
lahatsary momba ny gramera sy ny fanonona ny K’iche’ Maiàna
ny tononkalo Maiàna, indrindra fa ilay poeta malaza Humberto Ak’ab’al
ny ara-panahy teo amin'ny Maiàna
ny lanjan'ny fikatrohana nomerika sy ny teknolojia amin'ny fiteny teratany
ireo fomba amam-panao nentindrazan'ny Goatemalteky (entina ilazana ireo mponina ao Goatemalà)
ireo fomba amam-panao fototra sy nentindrazann'ny Maiàna.
Ny tena manosika ahy dia ny fanavotana, ny fanapariahana ary ny fahatakarana ny fiteny K'iche’ lalaiko. Inoako fa maneho ny fiainan'ny vondrompiarahamonina ny fiteny, andry lehibe mitazona ny kolontsaina. Ny fahafantarana ny fitenin'ny olona iray dia midika fahalalàna ny fomba fijeriny ny tontolo. Fitaratry ny fiainan'ny olona ny fiteny.
Nofiko ny hahavoavonjy ireo fiteny maiàna sy ireo fiteny teratany rehetra, ary hiverenan'ny lanjan'izy ireny, ka amin'ny alàlan'ny fikatrohana nomerika sy ireo hetsika marobe isankarazany manohana ireo fiteny teratany, hiampita hatrany hatrany amin'ireo taranaka mifandimby izy ireny. Dingana iray goavana hanatratrarana ny fitovian'ny teny ny fanekena ireo fiteny teratany ho toy ny fiteny ofisialy. Raha io no jerena, ilaina ary tena maika ny fanitarana ny fampiasàna ireo tenindreny amin'ny antanan-tohatra rehetra (pôlitika, toekarena, fanabeazana, fivavahana, sns…). Ho fampiroboroboana, fampahafantarana ary fitahirizana azy ireny, tsy maintsy mandray ny anjarany ny fanjakàna.